ILAINA NY MAZAVA – filazantsaramada
ILAINA NY MAZAVA
Publié parfilazantsaramada	 mars 21, 2014 mars 21, 2014 Laisser un commentaire sur ILAINA NY MAZAVA
« Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka; fa Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao. » Isaia 60:20
Ny masoandro, ny volana, ny Kintana…; ireo dia nataon’Andriamanitra hiantoka fahazavana ho antsika eto ambonin’ny tany (Genesisy 1:14-19). Ao amin’ny Matio 5:45, Andriamanitra dia mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tsy ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ihany anefa, fa manana anjara amin’io fahazavana io ihany koa ny Zavaboary rehetra. « Ilaina ny mazava ». Miantoka ny fiainan’ny zanak’olombelona ny hazavana. Eo no ahafahany miasa tsara sy mivelona am-pifaliana. Ankoatra ny masoandro sy ny volana ary ny kintana dia voatery mampiasa hazavana hafa toy ny jiro ny zanak’olombelona mba ahafahany manatanteraka; na dia vetivety ihany aza ny zavatra tiany atao sy ho araka ny filàny. Izany no ilazana fa raha tsy eo ny mazava dia tsy misy fiainana ao amin’ny olona.
Ny zava-misy rehetra dia maneho amintsika ilay tena fitiavan’Andriamanitra. Efa nomeny ny mazava isika tamin’ny alalan’ireo rehetra ireo, nomeny saina mazava sy mandinika ho afaka mamorona jiro fanazavana ihany koa. Noho izany rehetra izany dia manantitra fisaorana ho Azy no tokony imasoantsika isan’andro, isan’andro. Izao koa anefa; na dia nataon’Andriamanitra ho antsika aza izany rehetra izany dia ho levona ihany. Ahoana hoy ny tenin’Adriamanitra izay tonga tamin’i Joela mpaminany? « Ny masoandro sy ny volana ho tonga maizina, Ary ny kintana tsy hamirapiratra. » (Joela 4:15). Fa kosa, na dia mandalo aza ireny fanazavana rehetra hitantsika maso ireny dia mampanantena ny Soratra Masina fa tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka. Izany no manambara fa ny fahatsarana rehetra hitanao eto ambonin’ity tany fandalovana ity dia tandindon’ilay tena fiainana mandrakizay any ambony izay nomanin’i Jesosy ho ahy sy ho anao. Mety ho tsapanao ve ilay elanelan’ny mazava sy ny maizina? Rehefa tonga eo ianao dia mahatsiaro fa misy horohoro lalina ao anatinao ao. Rehefa eo ihany koa ny aizina dia tonga mangitakitaka sy feno tebiteby ny fo, nefa rehefa miposaka indray ny mazava dia misinda ny tahotra rehetra. Moa, tsy izany va no fisehon’ny fiainantsika ao amin’ny Kristy Jesosy? Rehefa lavitra azy isika dia mahatsiaro ho mijaly sy tsy mahita mangirana mihintsy! Jesosy anefa no Ilay tena Mazava (araka ny Jaona 1), hany ka rehefa miaraka aminy isika dia feno fifaliana. Ny masoandro, ny volana, ny kintana sy ny fanazavana maro samihafa dia mitondra fifaliana ho anao tokoa. Rehefa tsy eo anefa izany dia tonga kizintina sy sorena ary tsy mahavita na inona na inona akory ny olona. Izay ao amin’i Jesosy kosa, tanteraka ny fifaliany.
Jesosy Kristy dia efa nandevona ny fahamaizinana rehetra tsy hanjaka amin’ny fiainanao. Izany no vokatry ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Ny ota sy ny alahelo ary ny fanaintainana rehetra izay nohomboana niaraka taminy dia nalevina tao amin’ny fasana endriky ny fahafatesana. Izy kosa anefa dia nitsangana tamin’ny maty, ka nandresy izany fahafatesana izany mba isehoan’ny voninahitr’Andriamanitra (Ilay mazava mandrakizay). Nataony izany satria ny programany amiko sy aminao dia ny hiriaria miaraka Aminy ao amin’ny fiainana mandrakizay, feno fiadanana sy fifaliana tanteraka. Izao koa e! Raha hilentika ny masoandro amam-bolana; izay mino an’i Jesosy Kristy Tompo dia hazavain’ny voninahitr’Andriamanitra mandrakizay doria. Amen!
Publié parfilazantsaramada mars 21, 2014 mars 21, 2014 Publié dansUncategorized
FANDAHARAN’ASA MOMBA NY TANORA